Saamaynta Shinboolka Acetate Powder: Maxay dadku jecel yihiin Tbol? | AASraw
Saamaynta Shinboolka Acetate Powder: Maxay dadku jecel yihiin Tbol?
/blog/Clostebol Acetate/Saamaynta Shinboolka Acetate Powder: Maxay dadku jecel yihiin Tbol?
Posted on 02 / 10 / 2018 by Dr. Patrick Young ku qoray Clostebol Acetate.
Waa maxay Cawad-celinta Acetate?
Clostebol Acetate, waxaa laga yaabaa inaad dareentid wax la yaab leh oo ku saabsan magaca, haa, si aad u wacdid Turinabol (Tbol), Turinabol Oral, Oral Tbol, sida caadiga ah loo yaqaan "Dianabol iyada oo aan ka murugaysneyn. "waxay ku jirtay doorasho aad u wanaagsan oo loogu talagalay jir-dhisayaasha iyo cayaaraha caan ka ah sanado badan. Qaab dhismeedka tan steroid anabolic wuxuu aad u la mid yahay dhismaha Dianabol, oo weli ah midka ugu wanaagsan ee lagu ogaanayo xidhiidhka uu la leeyahay barnaamijka dawlad-goboleedka ee maal-gashiga gobolka ee Jarmalka.
Turinabol wuxuu leeyahay nolol firfircoon oo saacado ah 16 (nus nus saacadaha 8) waxaana lagu helaa foomamka afka iyo cirbadaha. In kasta oo foomamka la isku mudo aan waligood laga arki karin suuqa. Tbol waxay leedahay miisaankeedu yahay maadada 334.8854 g / mol ee saldhiga waxaana lagu ogaan karaa muddo lix toddobaad ah.
Mid ka mid ah waxyaalaha ugu fiican ee ku saabsan Turinabol waa in steroidkaan uu kor u qaado si tartiib ah, laakiin si gaar ah xajmiga muruqyada iyo guulo xoog leh. Fikrado adag oo la isku qurxiyo ayaa laga filan karaa dadka isticmaala steroidka sida ugu gaaban 4 illaa 8. Tbol ayaa sidoo kale ku faraxsan yahay awoodda ay ku hormarineyso xayawaan la'aanteed, waana door wanaagsan oo loogu talagalay ciyaartoyda raadinaya difaac adag oo si fiican u qeexan. Waxaa intaa dheer, isticmaalka Tbol wuxuu la xiriiraa: kororka muruqa, kordhinta xajmiga murqaha, kordhinta borotiinka, iyo horumarinta waxqabadka
Waa maxay budada loo yaqaan "Clostebol Acetate"?
Daawada Clostebol Acetate Powder, waa nooc ka mid ah budada madow. Cuntada ceeriin ee "Clostebol acetate", Clostebol acetate powder powdered waa mid ka mid ah iibka kulul ee steroids, ma aha oo kaliya qarashka budada Clostebol acetate, laakiin sidoo kale isudhealyo sare ee Clostebol haddii aan iibsado Clostebol acetate powder for sale, ama isticmaalka shaybaadhka, waxaan doorbidaa inaan iibso Clostebol acetate online cas, dooro alaab-bixiye-kiimiko ah "Clostebol acetate acetate" oo ku sii adkee xiriirka deganaanshaha. Dhiirranaanta qiiqa "Clostebol acetate" XK sida:
magaca Clostebol acetate, Turinabol, Tbol
xagiisayna > 98%
Daawada Clostebol asetat bixiyaha www.aasraw.com
Formula kelli C21H29ClO3
Miisaanka kelli 364.91
saxid kaydinta RT
Xidhmada boorsada foornada ama habaynta
waqtiga dhalmada gudaha saacadaha 12 ka dib bixinta
Qalabka lacag bixinta WesternUnion, MoneyGram, Bitocin, Telefoonka Bankiga
Astaamaha Kiimikada ee Turinabol / Clostebol Acetatepowder
Tbol waa nooc isbeddel ah ee Dianabol (Methandrostenolone); isku-dar ah Dianabol iyo Clostebol (4-chlorotestosterone).
In kasta oo qaabdhismeedka kiimikada guud uu la mid yahay Dianabol, waa hormoon badan oo fudud.
Labada kiimikadood ayaa hoos u dhigtay khatarta ah in lagu sumo galinta estrogen, laakiin tani waxay sidoo kale hoos u dhigtay awoodda korriinka iyo sidoo kale.
Dianabol waxay leedahay qiyaasta anabolic ee u dhaxeysa 90-210, halka Turinabol uu leeyahay qiyaasta anabolic ee 54.
Sidee buu u shaqeeyaa Turinabol / Clostebol Acetate?
Inkastoo Tbol uu ka liito tan Dianabol haddana wuxuu bixiyaa faa'iidooyin kala duwan, iyada oo aan la helin saameynta daaweynta steroids ee kor u qaadeysa estrogen.
Tani waxay ka dhigan tahay inaad filan karto inaad si joogto ah u aragto, haddii uusan aheyn murugo aan fiicnayn, iyada oo aan la kulmin wax cillad ah, haynta biyaha ama ginecomastia.
Turinabol / Clostebol Acetate Benefits Cycle
Waxaan fiirineynay waxa Turinabol yahay, sidaa daraadeed hadda waa waqtigii aan eegeyno qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee la xiriira steroidkaan. Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee Clostebol Acetate / Turinabol waa:
Wanaagsan Kobaca Murqaha
Maadaama ay tahay nooc ka mid ah Dianabol wax laga beddelay, waa in ay timaaddo sidii naxdin aan loo ogaan karin in Tbol uu yahay mid ku habboon kuwa jir-dhiseyaashu raadinaya in ay dhab ahaantii ku xiran yihiin qaar ka mid ah muruqyada culus.
Kadib kaliya hal wareeg oo ah Turinabol, jidh-dhisayaasha waxay soo saareen hagaajinta bini'aadanka ee jirkooda, taas oo ka dhigeysa mid aad u caan ah oo ah calaamadaha aabo-biyeedka ee ragga.
Kadib hal wareeg oo kaliya, ma ahan wax caadi ah in korodhka ka badan xaddiga 20 ee muruqa, taas oo aad u qibrad badan.
Dadka qaarkood, si kastaba ha ahaatee, waxay u jawaabaan si ka fiican kuwa kale, waxayna ku buuxsamaan xaddiga 30 kadib hal wareeg oo Turinabol ah.
Haddii aad raadineyso inaad dhisato murqo, aad si xoog leh ugu shaqeyso jimicsiga, waxaad cuni kartaa mid sax ah, nasasho kugu filan, adoo isticmaalaya xaqiiqooyinka saxda ah, waxaad ogaan doontaa in waalidku uu kordhayo muruqyada, iyadoo hagaajinta noqoto mid aad u badan oo la ogaan karo maalin dhaaf.
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan Tbol waa xaqiiqda ah in uu yahay steroid ah oo ku habboon marxaladaha bulking, iyo jarida wejiyada.
Iyadoo inta badan steroids ay tahay mid xoog ah, ama la gooyey, labadaba labadaba.
Si kastaba ha ahaatee, Tbol waxaa loo isticmaali karaa qashin-saarka, maadaama aynu eegnay, iyo sidoo kale waxay ku haboon tahay in la jarjaro qaybaha.
Tbol ayaa laga helay kaliya kor u qaadista koritaanka iyo soo kabashada murqaha, sidoo kale wuxuu xoojiyaa dheef-shiid kiimikaadka oo kordhiya baruurta, sidaa darteed waxaad macno ahaan dili kartaa dufanka markaad dhiseyso murqo.
Ma jiraan waxyaabo badan oo steroid ah oo adduunka ah oo kuu ogolaanaya inaad sameyso, taas oo sameysmaayo xayawaanka yar yar.
Daawada Turinabol / Clostebol Acetate Dufanka
Inkasta oo aan suurtagal ahayn suugaanta dhabta ah ee macluumaadka daawada rijeetada la heli karo ee ku saabsan daawooyinka Turinabol ee caafimaadka, inta badan qiyaasaha daawooyinka loo qoray ayaa la ogaaday inay ku jiraan noocyada 5 - 10mg maalin kasta ee bukaanka lab ah. Dumarka loo yaqaan 'prescriptionTurinabol' ayaa ku jira qiyaasta 1 - 2.5mg maalin kasta.
Turinabol / Clostebol Acetatepowder Daawooyinka jirka ee jirka
Iyadoo ku xiran hadafyada shakhsi ahaaneed, bilowga cusub waxay heli doonaan qiyaasta daawada Turinabol ee xaddiga 15 - 30mg maalin kasta, inkasta oo tan loo tixgeliyo qiyaasta dose oo hooseeya oo faa'iidooyinka aaney noqonin mid si aad ah u daran. Daawada Turinabol ee noocan oo kale ah waxay ku siinaysaa faa'iido aan la ogaan karin, laakiin aan si fiican u dhicin oo aan waxba ku jirin qaabka saameynaha is-gardarrada ah (marka laga reebo kuwa ugu nugul saamaynta orrogenic, tusaale ahaan).
Isticmaalayaasha Istariyeyaasha Dhexdhexaadka ah ee anabolic ayaa hubaal ka heli doona horumarka xitaa ka weyn xagga habka xoogga iyo korodhka kor u kaca ee 30 - 50mg maalin kasta oo leh wacyigelin aad u hooseeya ama fursadaha saameynta daaweynta iyo raad-raacyada.
Goobta Turinabol ee heerarka sare ee xaddiga 50 - 80mg maalintii (iyo mararka qaar xitaa ka sareeya), taas oo dabcan waxay bixinaysaa xoogaa aad u xoogan iyo guulo ballaaran, laakiin kharashka sii kordhaya ee istratiijiga ah ee tallaalka Turinabol ee kor u kaca. Guud ahaan, si kastaba ha ahaatee, badiba dadka isticmaala waxay helayaan natiijooyin ku filan oo dhexdhexaad ah wadarta qiyaasta hore loo soo sheegay, taas oo ku saabsan 50mg maalintii. Qiyaaso ka hooseeya 40mg maalintiiba waxay u muuqdaan in la isticmaalo oo kaliya ilaalinta qulqulka caanaha marka barafka iyo jarista wejiga.
Dumarka Turinabol / Clostebol Acetate Pharm
Gudaha qaybta jirka jirka iyo isboortiga, ayaa ku haboon haweenka Turinabol ee ku habboon inay ku dhex jiraan 5 - 10mg maalintii. Turinabol waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah steroids oo ku haboon haweenka, taas oo la siinayo heerka qiimeyneed ee 6. Dabeecadda aadka u liita ee Turinabol waa waxa ay bixiyaan isticmaalayaasha Turinabol ee haweenka leh awoodda ay u leeyihiin in ay dareemaan awood xoog leh iyo isbeddel jireed oo aad u yaryar oo aan wax saameyn ah lahayn. Hase yeeshee, xaddiga 10mg ama wax ka badan maalintii waxay muujiyeen saameynta waxyeellada dumarka ee 1, iyo dumar badan oo ka mid ah haweenka Jarmalka Olombikada Olympic ayaa la siiyay qiyaaso ka sarreeya tan (15 - 35mg maalintii) , inkastoo dabciga shubanku uu noqday arrin ugu dambeyntii.
Saameynada Sidee Laga Dhici Karaa Turinabol / Clostebol Acetate Powder
Dhammaan steroids waxay la yimaadaan waxyeelo, laakiin marka ay timaado wareegga Tbol oo kaliya, way fududahay in la yareeyo. Maskaxda ku hay in waxyaabaha dheeraadka ah ee hoos ku yaal, marka laga reebo joogitaanka biyaha, ay yihiin talooyin kaliya. Waxay kaa caawin karaan inaad ilaaliso caafimaadkaaga, laakiin haddii aad isticmaasho wareeggaaga Tbol oo keliya marka loo eego tilmaamaha, waa inaadan u baahnayn cabasho.
Yamaasyada caanaha waa lakab dheeraad ah ee ilaalinta beerkaaga. Inkastoo ilaalinta dhererka wareegga gaaban iyo qiyaasaha hooseeya waa habka ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo beerkaaga, yamaaruggii caanuhu wuxuu u dhaqmaa sida boog.
Berrinka haweenka iyo / ama xoqidda celinta abuurka ayaa kaa caawin kara cadaadiska dhiiggaaga. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan horey u qabin cadaadis dhiig oo sarreeya, tani maahan arrin adiga kugu habboon.
Taurine waa aalado amino ah oo u adeegta sidii dhismo loogu talagalay dhamaan dadka kale. Waxay ku siinaysaa tamar illaa hawlahaaga, iyo sababta oo ah waxaa lagu muujiyay in lagu daro mugga unugyada murqaha, waxay bixisaa bambooyin miyir leh.
Saliida Krill waa ili weyn oo ah omega-3s, taas oo ka hortageysa dhaawac xagga maskaxda ah iyo caawinta dib u soo kabashada ka dib. Daraasadaha qaarkood ayaa sidoo kale muujinaya in saliidda krill ay gacan ka geysan karto hagaajinta hawlaha qanjirka, kaas oo taageera dufanka shuban iyo waxay ku siinaysaa muruqyo aad u qeexan.
Biyo badan iyo cabitaanada isboortiga leh ee elektaroolitiga ayaa ka caawin kara inay nadiifiyaan nidaamkaaga, taas oo ah fikrad fiican, laakiin gaar ahaan marka ay qaadayso steroids.
SERMs sida Clomid iyo Nolvadex ka dib ayaa kaa caawin kara inaad hayso faa'iidooyinkaaga haddii aad u isticmaasho jihada ka dambeeya wareega.
Qeybta ugu fiican waa Tbol ma aromatise, gaar ahaan haddii uu yahay mid saafi ah, sidaa daraadeed uma baahnid inaad ka welwelisid waxyaabo sida xanuunka daran iyo ginecomastia.
Tags: soo iibso Clostebol Acetate budada, Xiddiga loo yaqaan "Clostebol Acetate", Waa maxay budada loo yaqaan "Clostebol Acetate"
Xagee laga helaa bixiyaha xayawaanka 17-Methyltestosterone online online?	Runtii miyay Modafinil ku dhiirigelineysaa in maskaxdu si fiican u shaqeyso ka dib qaadashada?